An African trainee is seen during a training session on lion dance in Dalian, northeast China's Liaoning Province, Aug. 28, 2016. As a China-Africa cultural exchange event, ten trainees from Zimbabwe and Nigeria participated in the five-week training course on the Chinese lion dance in Dalian.
Li Mingxu (L front), an inheritor of Jinzhou Lion Dance, teaches African trainees the essentials of lion dance performance during a training session in Dalian, northeast China's Liaoning Province, Aug. 28, 2016. As a China-Africa cultural exchange event, ten trainees from Zimbabwe and Nigeria participated in the five-week training course on the Chinese lion dance in Dalian.
An African trainee poses for a photo with performers after watching the Kungfu show in Dalian, northeast China's Liaoning Province, Aug. 28, 2016. As a China-Africa cultural exchange event, ten trainees from Zimbabwe and Nigeria participated in the five-week training course on the Chinese lion dance in Dalian.
African trainees learn to make dumplings after a training session in Dalian, northeast China's Liaoning Province, Aug. 28, 2016. As a China-Africa cultural exchange event, ten trainees from Zimbabwe and Nigeria participated in the five-week training course on the Chinese lion dance in Dalian.
African trainees show their paper-cutting works, together with paper-cutting artist Pang Liying, in Dalian, northeast China's Liaoning Province, Aug. 28, 2016. As a China-Africa cultural exchange event, ten trainees from Zimbabwe and Nigeria participated in the five-week training course on the Chinese lion dance in Dalian.